आदरणीय दिदी, बहिनी तथा दाजु भाइहरु ! कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा नेपाली समाजमा यतिखेर संंन्त्रास फैलिएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो अवस्था कस्तो छ त ? यहि कार्तिक ५ गते, २४ घण्टामा मात्र ५ हजार ७४३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २४ घण्टामा ३ हजार १०७ नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । सोही दिन २४ घण्टामा मात्र २६ जनाले ज्यान गुमाए भने जम्मा मृतकको संख्या ७९१ पुगेको छ । विज्ञहरुहरुको अनुमान छ, दशैं र त्यसपछि यो संख्या धेरै बढने छ । यसले स्थिति भयावह बन्ने खतरा स्पष्ट सँग देख्न सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो जिम्मेवारी जनताको जीवन रक्षा गर्नु हो । विडम्बना ! ठिक यति खेरै यो सरकारले यसको उपचारको जिम्मेवारीबाट हात खडा गरेर यो महामारीको उपचार खर्चको जिम्मेवारी अब आइन्दा सरकारले नलिने र सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्वन्धित व्यक्ति र उनका परिवारले लिनु पर्ने भन्ने घोषणा गरेको छ । यो महामारी सँग विमारी र उनीहरुका परिवारले मात्र लडेर जित्नु पर्छ भन्ने सोच र व्यवहारलाई पाखण्ड सिवाय अरु के भन्न सकिन्छ र ? सरकारको यो कदमले महाव्याधीलाई अझ फैलिन सहयोग पुग्ने कुरा विज्ञहरु बताइरहेका छन् । यसले विद्यमान संविधानको धारा ३५ र सर्वोच्च अदालतको यस सम्वन्धी परमादेशको समेत धज्जी उडाएको छ । त्यसकारण सरकारले यो गलत निर्णयलाई तीन दिन भित्र फिर्ता लिएर निःशुल्क उपचारको कामलाई अझ व्यवस्थित गरोस् भन्ने माग गर्दै हामीले यहि कार्तिक ३ गते एउटा वक्तव्य मार्फत सजग गराएका थियौं । तर, सरकारले आफ्नो यो जनघाती निर्णयलाई जवर्जस्ती बचाउ गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ । त्यसको भोली पल्टै अस्पतालहरुले तोके बमोजिमको धरौटी बुझाए मात्र उपचार गरिने सार्वजनिक सूचना नै जारि गरे । अस्पतालमा भर्ना भएका गम्भीर प्रकारका विरामीहरु अस्पताल छाडेर बाहिरन वाध्य भएका छन् । यस प्रकारको स्थिति पैदा भएकोले जोखिमको पनि परवाह नगरी उक्त सरकारी निर्णयको खारेजीको मागलाई निरन्तरता दिँदै हामी सडकमा ओर्लन वाध्य भएका छौं । यदि सरकारले यो मानवता विरोधी निर्णय फिर्ता लिएन भने हाम्रो सडक आन्दोलन जारी रहने घोषणा गर्दछौं । यो महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षागर्ने कार्यमा सहमत हुने सम्पूर्ण नेपाली दिदी वहिनी, दाजु भाइलाई यो अभियानमा सहभागि हुन पनि हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं ।
कार्यगत एकतामा सम्मिलित २१ राजनीतिक संगठनरु : १.नेकपा(मशाल) २.नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) ३.नेकपा(माले) ४.राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल ५.देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ६.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, ७.नेकपा(माओवादी केन्द्र), ८.राष्ट्रिय जागरण मंच ९.जन समाजवादी पार्टी १०.नेकपा(संयुक्त) ११.राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपाल १२.वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी १३.नेकपा(बोल्शेविक), १४.राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल १५.एम् सी सी खारेज अभियान, १६.पुष्पलाल अध्ययन समाज, १७.सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी) १८.माक्र्सवादी एकता अभियान, १९.नेकपा(माक्र्सवादी), २०.नेकपा माक्र्सवादी(पुष्पलाल) र २१. ने क पा (माओवादी) ।